WSLg: Zvishandiso zveLinux neGUI zvinouya kuWindows 10 | Linux Vakapindwa muropa
Rinenge gore rapfuura, Microsoft shambadzo iyo chinangwa chekuunza GUI Linux kunyorera kuWindows Subsystem YeLinux, inonyatso kuzivikanwa seWSL. Vamwe "vane rombo rakanaka" vakakwanisa kuzviedza, asi kusvika masikati ano ndipo pavakazopa chimwe chiziviso, kunyanya kuti izvo zvavakatumidza zvave kuwanikwa kune vari mukati WSLg. Kunyangwe ivo vasingazvitsanangure muchinyorwa chavo, iyo G ingangodaro iri yeGUI, inova iyo Graphical User Interface.
Hongu Vakadaro ndeyekuti WSLg ndeye vhura sosi ficha, uye ivo vakaburitsa kuratidzwa kwevhidhiyo kwauinayo pazasi pemitsara iyi, iko kunovhura software senge gedit, Audacity kana Edge yeLinux. Kana uchivhura Linux application neGUI, iyo logo yeTux, iyo Linux mascot, inoonekwa pane icon iri pasi pepaneru.
WSLg yakavhurwa sosi
Zvishandiso zveLinux zvinoonekwa mune yekutanga menyu uye zvakare zvinogona kuwana iyo odhiyo sisitimu, saka zvinoita sekunge mune ramangwana vanozokwanisa kushandiswa zadzisa zvirongwa zveLinux paWindows 10 nekuda kweWSLg. Linux IDEs inogona zvakare kushandiswa, uye rutsigiro rwe Hardware-yakakurumidza 3D mifananidzo inosanganisirwa.
Ichi chitsva chave kuwanikwa muWindows 10 vhezheni Kuongorora Kwomukati Kuvaka 21364, asi chimwe chinhu chekuchengeta mundangariro: kunyange zvichinzwika zvakanaka, uye zvichinyatso kuita kunge chinonakidza basa kwandiri, hazvife zvakashanda sezvazvinoita mukuzvarwa kweLinux. Ichokwadi kuti WSL yakawedzera kuyerera nekufamba kwenguva, asi kana iwe uchinge watoona kushomeka kumhanya kana uchingoshanda chete neiyo terminal, ini handitombodi kufungidzira mutsauko uripo pachave neapp ine interface inoitwa zvine mwero kombiyuta.
Asi zvinhu sezvazviri: kana iwe uine timu yakanaka, kukwanisa kushandisa zvinoshandiswa chete kubva kune mamwe masisitimu anoshanda Kunyangwe kana vakagadziridzwa chiri chinhu chakakosha, kunyangwe ini ndisingambove fan of system yeMicrosoft nekuda kwekunzwa kwakashata kuti kumhanya kwayo kunondisiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux maapplication neGUI anouya kuWindows 10, kana iwe uri wekupinda mukati
Kubva kuTIMOSOFT ini handidi CHINHU.